Tibeta - Wikipedia
I Tibeta ara-tantara
I Tibeta dia faritra mizakatena ao Sina. I Lhassa no renivohiny. Ao amin' ny tapany andefan' i Sina no misy azy, ka mamaritra azy ao avaratra ny faritra mizakatenan' i Xinjiang sy ny faritanin' i Qinghai, ao atsinanana ny faritanin' i Sichuan, ao atsimo-atsinanana ny faritanin' i Yunnan sy i Birmania, ao atsimo i India sy i Botàna ary i Nepaly, ary ao andrefana i India. Miovaova eo anelanelan' ny 1 222 600 km2 (faritra mizaka tenan' i Tibeta) sy 2 500 000 km2 (Tibeta ara-tantara na Tibeta Lehibe).
Ilay atao hoe "Tibeta ara-tantara" izay takian' ny governemanta tibetana an-tsesitany dia misy faritra telo, dia i Ü-Tsang (ny ampahany be amin' io faritra io dia ao amin' ny faritra mizakatenan' i Tibeta) sy i Amdo (izay mizara amin' ireto faritany ireto: i Qinghai sy i Gansu ary i Sichuan) ary i Kham (izay mizara amin' ireto faritany ao amin' ny faritra mizakatenan' i Tibeta: i Sichuan sy i Yunnan).
Miisa 6 000 000 any ho any ny Tibetana ao amin' ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina. Ny ankamaroan' ny Tibetana dia manaraka ny bodisma. Miteny amin' ny endrika isam-paritra telon' ny fiteny tibetana izy ireo. Ny fiteny tibetana dia ao amin' ny fianakaviam-piteny tibetô-birmana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tibeta&oldid=1000650"
Voaova farany tamin'ny 25 Janoary 2021 amin'ny 11:50 ity pejy ity.